IiAcronyms zoThengiso, iiAcronyms zoThengiso, iAconyms kunye neZifinyezo Glossary | Martech Zone
Ukuthengisa iiAcronyms kunye neziFinyezo Glossary
Kubonakala veki nganye, ndibona okanye ndifunda esinye isaci. Ndiza kugcina uluhlu olusebenzayo lwazo apha! Zive ukhululekile ukutsiba ngoonobumba be igama elithengisayo, isishwankathelo sentengiso, okanye itekhnoloji yokuthengisa kunye nentengiso isifinyezo ufuna:
Amanani A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ukuthengisa kunye nokuThengisa iiAcronyms kunye nezifinyezo (Amanani)
Qhagamshelana - Ubungqina boBini-FactorUmaleko ongezelelweyo wokhuseleko osetyenziselwa ukuqinisekisa ukhuseleko kwiiakhawunti ezikwi-Intanethi ezingaphaya kwegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Umsebenzisi ungena ngegama eligqithisiweyo kwaye emva koko uyacelwa ukuba angene kwinqanaba lesibini lokungqinisisa, ngamanye amaxesha aphendule ngekhowudi ethunyelwe ngomyalezo obhaliweyo, nge-imeyile, okanye ngesicelo sokungqinisisa.
4P - Imveliso, Ixabiso, iNdawo, uKwazisa: Imodeli ye-4P yentengiso ibandakanya imveliso okanye inkonzo oyithengisayo, ubiza malini kwaye lixabiso, apho ufuna ukuyinyusa, kunye nendlela oza kuyazisa ngayo.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (A)
ABC - Soloko Uvala: Le yeyokuqala kwii-acronyms zokuthengisa omele uzifunde njengomthengisi omncinci wokuthengisa! Intle kakhulu indlela esebenza ngayo. Ukuze ube ngumthengisi osebenzayo kuthetha ukuba uya kudinga iABC.
IABM - Intengiso esekwe kwiAkhawunti: ekwabizwa ngokuba yintengiso yeakhawunti ephambili, iABM yindlela ecwangcisiweyo apho umbutho uququzelela unxibelelwano kwintengiso kunye nentengiso kunye nokujolisa kwintengiso kubume obumiselwe kwangaphambili okanye iiakhawunti zabathengi.
ACoS - Iindleko zeNtengiso yeNtengiso: Imethrikhi esetyenziselwa ukulinganisa ukusebenza kwephulo leMveliso eziXhasiweyo zeAmazon. I-ACoS ibonisa umyinge wenkcitho kwintengiso ekujoliswe kuyo kwaye ibalwa ngale ndlela: I-ACoS = intengiso ichitha ukuthengisa.
ACV - Ixabiso eliPhakathi loMthengiUkugcina nokuthengisa umthengi wangoku kuhlala kungabizi kakhulu kunokufumana ukuthembela kokutsha. Ixesha elingaphezulu, iinkampani zibeka esweni ukuba yimalini ingeniso yomthengi nganye abayifumanayo kwaye bajonge ukuyonyusa. Abameli beakhawunti bahlala behlawulwa ngokuxhomekeke kubuchule babo bokunyusa i-ACV.
AE - Umpathi wezemali: Eli lilungu leqela elithengisa elivala ukujongana namathuba okuthengisa afanelekileyo. Ngokubanzi bangamalungu eqela leakhawunti elichongwe njengomthengisi ophambili wale akhawunti.
AI - Kukubhadla okungeyonyani: Isebe elibanzi lobunzululwazi bekhompyutheni elijongene nokwakha oomatshini abanobuchule abakwaziyo ukwenza imisebenzi efuna ukuba nolwazi lwabantu. Inkqubela phambili yokufunda umatshini kunye nokufunda okunzulu kudala utshintsho lweparadigm phantse kuwo onke amacandelo eshishini lobuchwephesha.
I-AIDA - Ukuqwalaselwa, umdla, umnqweno, isenzo: Le yindlela yokukhuthaza eyilelwe ukukhuthaza abantu ukuba bathenge ngokufumana ingqalelo, umdla, umnqweno wemveliso, emva koko ubakhuthaze ukuba bathathe inyathelo. I-AIDI yindlela esebenzayo yokufowuna okubandayo kunye nentengiso ethe ngqo yokuphendula.
AM - Umlawuli we-akhawunti: I-AM ngumthengisi onoxanduva lokulawula iakhawunti enkulu yabathengi okanye iqela elikhulu leakhawunti.
API - IsiNxulumanisi soLungiselelo lwe-Aplikheyishini yokwenziwa kwemiYalezo: Iindlela zeenkqubo ezingafaniyo zokuthetha omnye nomnye. Izicelo kunye neempendulo zifomathiwe ukuze bakwazi ukunxibelelana. Njengokuba isikhangeli sisenza isicelo se-HTTP kwaye sibuyisa i-HTML, ii-API ziyacelwa ngesicelo se-HTTP kwaye zibuyise iXML okanye iJSON.
AR - Ukwenyuka kwamaxabiso: Itekhnoloji ebeka ngaphezulu amava eveliswe ngekhompyuter kwimbono yomsebenzisi welizwe lokwenyani, ngaloo ndlela ibonelela ngombono odibeneyo.
I-ARPA- Umndilili we-MRR (ingeniso ephindaphindeka yenyanga) ngeAkhawunti nganye -Lo ngumfanekiso obandakanya ubungakanani bemali yengeniso yenyanga kuzo zonke iiakhawunti
I-ARR - Ingeniso yaqho ngonyaka: Isetyenziswe kuninzi lwamashishini avelisa izivumelwano zonyaka. I-ARR = 12 X MRR
ASO - Ukulungiswa kweVenkile yeApple: indibaniselwano yesicwangciso, izixhobo, iinkqubo kunye nobuchule obuthunyelwe ukunceda isikhundla sakho sesicelo esingcono kunye nokubeka iliso kubume baso kwiziphumo zophando lweVenkile ye App.
I-ASR-AUtomatic Ukwamkelwa kweNtetho: ukukwazi kweesistim ukuqonda kunye nokwenza intetho yentetho. Iinkqubo ze-ASR zisetyenziselwa ukuncedisa kwilizwi, ukuxoxa, ukuguqulela umatshini, kunye nokunye.
AT - Iitekhnoloji eziNcedisiweyonayiphi na itekhnoloji umntu ayikhubazekileyo ayisebenzisayo ukwandisa, ukugcina okanye ukuphucula ukusebenza kwabo.
I-ATT - Ukulandelela ukuKhangela kweNkquboIsakhelo kwizixhobo zeApple iOS ezibonelela abasebenzisi ngesakhono sokugunyazisa bobabini kwaye babone ukuba idatha yabo yomsebenzisi ilandelwa njani ngumsebenzisi okanye isixhobo ngesixhobo esiselfowuni.
I-AutoML - Ukufunda komatshini oZenzekelayoUkuthunyelwa okungafundekiyo koFundo loMatshini ngaphakathi kweSalesforce okuhlala bonke abathengi kunye nawo onke amatyala okusebenzisa ngaphandle kwesidingo sedatha yoososayensi.
I-AWS - IiNkonzo ze-Amazon Web: Iinkonzo zewebhu zeAmazon zineenkonzo ezingaphezu kwe-175 kuluhlu olubanzi lweetekhnoloji, amashishini, kunye neemeko zokusebenzisa ezinikezela ngendlela yokuhlawula njengoko usiya kumaxabiso.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (B)
B2B - Ishishini kwiShishini: I-B2B ichaza umsebenzi wokuthengisa okanye ukuthengisa kwelinye ishishini. Iivenkile ezininzi zentengiso kunye neenkonzo ezilungiselela amanye amashishini kwaye uninzi lwentengiselwano ye-B2B yenzeka emva kwesigcawu ngaphambi kokuba imveliso ifike kubathengi.
B2C - Ishishini kuMthengi: I-B2C yimodeli yeshishini ngokwesiko lokuthengisa ngokuthe ngqo kumthengi. Iinkonzo zokuthengisa ze-B2C zibandakanya ukubhenka kwi-Intanethi, ifandesi kunye nokuhamba, hayi ukuthengisa kuphela.
B2B2C - Ishishini ukuya kwiShishini ukuya kuMthengiImodeli ye-e-yorhwebo edibanisa i-B2B kunye ne-B2C kwimveliso epheleleyo okanye intengiselwano yenkonzo. Ishishini liphuhlisa imveliso, isisombululo, okanye inkonzo kwaye liyinike elinye ishishini 'abasebenzisi-bokugqibela.
BI - Ubukrelekrele kwishishini: Isixhobo sezixhobo okanye iqonga labahlalutyi lokufikelela kwidatha, bayisebenzise ngobuqili, emva koko bayibonise. Ingxelo okanye iziphumo zedashboard zenza ukuba iinkokheli zeshishini zibeke iliso kwii-KPI kunye nenye idatha ukuze benze izigqibo ezingcono.
IBOGO - Thenga enye Fumana enye: "Thenga enye, fumana enye simahla" okanye "ezimbini ngexabiso elinye" yindlela eqhelekileyo yokukhuthaza ukuthengisa.
IBOPIS - Thenga kwi-Intanethi Khetha ngaphakathi kwiVenkileIndlela apho abathengi banokuthenga khona kwi-Intanethi kwaye bathathe kwangoko kwindawo yentengiso yendawo. Oku kwakukhula okubonakalayo nokwamkelwa ngenxa yobhubhane. Abanye abathengisi bade babe nezikhululo zokuqhuba apho umsebenzi elayisha iimpahla ngqo kwimoto yakho.
I-BR - Umvuzo weBounce: Ixabiso lokuhlawula libhekisa kwisenzo esenziwa ngumsebenzisi xa ukwiwebhusayithi yakho. Ukuba bafika kwiphepha kwaye bashiya ukuya kwenye indawo, bakhuphe iphepha lakho. Ingabhekisa kwi-imeyile ebhekisa kwii-imeyile ezingafikeleli kwibhokisi engenayo. Yi-KPI yokusebenza komxholo wakho kwaye inqanaba lokubhabha okuphezulu kunokubonisa umxholo wentengiso ongasebenziyo phakathi kweminye imiba.
KAKHULU - Igunya lohlahlo-lwabiwo mali lifuna ixesha: Le yifomyula esetyenziselwa ukumisela ukuba lixesha elifanelekileyo lokuthengisa kwithemba.
BDR - Ummeli woPhuhliso lweShishini: Inqanaba lendawo yokuthengisa ekhethekileyo yokuthengisa enoxanduva lokuphuhlisa ubudlelwane bezoshishino, amaqabane kunye namathuba.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (C)
I-CAC - Iindleko zokuThengwa kwabaThengi - Enye yeempawu zokuthengisa zokulinganisa i-ROI. Zonke iindleko ezinxulumene nokufumana umthengi. Ifomula yokubala i-CAC (ichitha + imivuzo + iikhomishini + iibhonasi + ngaphezulu) / # zabathengi abatsha ngelo xesha.
INGABE-SPAM - Ukulawula ukuhlaselwa kweZinto ezingamanyala kunye nokuThengisa: Lo ngumthetho wase-US owapasiswa ngo-2003 othintela amashishini ekuthumeleni i-imeyile ngaphandle kwemvume. Kuya kufuneka ufake ukhetho lokungabhalisi kuzo zonke ii-imeyile kwaye akufuneki ukongeza amagama kuwo ngaphandle kwemvume echaziweyo.
I-CASS Inkqubo yokuNika iNkcazo ngokuchanekileyo: yenza i-United States Postal Service (i-USPS) ukuba ivavanye ukuchaneka kwesoftware elungisa idibanise iidilesi zesitalato.
CCPA - Umthetho wabucala wabathengi waseCalifornia: umthetho karhulumente ojolise ekuphuculeni amalungelo abucala kunye nokukhuselwa kwabathengi kubahlali baseCalifornia, eUnited States.
CCR - Ireyithi yoMthengi yeChurnImetriki esetyenziselwa ukulinganisa ukugcinwa kwabathengi kunye nexabiso. Ifomula yokumisela i-CCR yile: CR = (# yabathengi ekuqaleni kwexesha - # abathengi ekupheleni kwexesha lokulinganisa) / (# yabathengi ekuqaleni kwexesha lokulinganisa)
CDP - Iplatifomu yeDatha yoMthengi: iziko ledatha eliphakathi, elizingisayo, elimanyeneyo nelifikelelekayo kwezinye iinkqubo. Idatha itsaliwe kwimithombo emininzi, icociwe, kwaye yadityaniswa ukwenza iprofayile yomthengi omnye (ekwabizwa ngokuba ngumbono we-360-degree degree). Le datha ingasetyenziselwa ukuthengisa izinto ezenzekelayo okanye ngenkonzo yabathengi kunye neengcali zentengiso ukuqonda ngcono nokuphendula kwiimfuno zabathengi. Idatha inokudityaniswa kunye neenkqubo zentengiso kwicandelo elingcono kunye nokujolisa kubathengi ngokusekwe kukuziphatha kwabo.
I-CLM - Ulawulo lobomi bekhontrakthiUkuqhubekeka, ukulawulwa kwemigaqo yesivumelwano ukusuka kolwaluko ngokunikezela, ukuthotyelwa, kunye nokuhlaziywa. Ukuphunyezwa kwe-CLM kungakhokelela kuphuculo olubonakalayo lokonga iindleko kunye nokusebenza kakuhle.
CLTV okanye i-CLV - Ixabiso leXesha lokuPhila loMthengiUqikelelo oludibanisa inzuzo kuyo yonke ubudlelwane phakathi kobomi bomjikelo womthengi.
CMO - IGosa loNtengiso eliyiNtloko: Isikhundla esilawulayo esinoxanduva lokuqhuba ulwazi, ukubandakanyeka, kunye nemfuno yokuthengisa (MQLs) kumbutho.
I-CMP - Iqonga lokuThengisaIqonga lokunceda abathengisi bokuqukethwe ukuba bacwangcise, basebenzisane, bavume, kwaye basasaze umxholo weendawo, iibhlog, imidiya yoluntu, iindawo zokugcina umxholo kunye / okanye nentengiso.
I-CMRR - Ukuzibophelela kwiRhafu yeNyanga: Esinye isifinyezo sentengiso esivela kwicala lobalo. Le yifomyula yokubala iMMR kunyaka-mali ozayo. Ifomula yokubala i-CMRR yi (MMR yangoku + kwi-MMR yexesha elizayo, thabatha iMMR yabathengi akunakulindeleka ukuba bahlaziye kunyaka-mali.
I-CMS - Inkqubo yoLawulo loLawulo: Oku kubhekisa kwisicelo esidibanisa kwaye siququzelele ukuyilwa, ukuhlelwa, ukulawulwa kunye nokusasazwa komxholo. Ngokubanzi kusetyenziswa ukubhekisa kwiwebhusayithi, imizekelo yeCMS are Hubspot kunye neWordPress.
CMYK - ICyan, iMagenta, Mthubi, kunye nesitshixoImodeli yombala othabathayo, esekwe kwimodeli yombala ye-CMY, esetyenziselwa ukuprinta umbala. I-CMYK ibhekisa kwiipleyiti ezine ze-inki ezisetyenziselwa ukuprinta umbala: i-cyan, magenta, tyheli, kunye nesitshixo.
I-CNN-CInethiwekhi yeNeural eguqukayo: Uhlobo lwenethiwekhi enzulu ye-neural ehlala isetyenziselwa ukubona umbono wekhompyuter.
I-COB - Ukuvalwa kweShishini: Njengakwi… “Kufuneka sihlangabezane nesabelo sethu sangoCanzibe nge COB.” Rhoqo isetyenziswa ngokungafaniyo ne-EOD (Ukuphela koSuku). Ngokwembali, i-COB / EOD ithetha nge-5: 00 pm.
I-CPC - Iindleko ngokuCofa: Le yindlela abavakalisi abayisebenzisayo ukuhlawulisa indawo yentengiso kwiwebhusayithi. Abathengisi bahlawula kuphela intengiso xa icofa, hayi ukubhenca. Ingabonisa kumakhulu eziza okanye amaphepha, kodwa ngaphandle kokuba kuthathwe amanyathelo kuwo, akukho mrhumo.
I-CPG - Izinto zeMpahla zaBathengi: Iimveliso ezithengiswa ngokukhawuleza kwaye ngexabiso eliphantsi noko. Imizekelo ibandakanya iimpahla zekhaya ezingagungqiyo ezifana nokutya okuhlanganisiweyo, iziselo, izinto zokuthambisa, iilekese, izithambiso, iziyobisi, izinto ezomileyo kunye nezinye izinto ezisetyenziswayo
I-CPI - Izalathi zeNtsebenzo yoMthengiIitrikhi zijolise ekuboneni komthengi njengexesha lokusombulula, ukufumaneka kwezixhobo, ukusetyenziswa ngokulula, amathuba okucebisa, kunye nexabiso lemveliso okanye inkonzo. Ezi metric zibangelwa ngokuthe ngqo kukugcinwa kwabathengi, ukukhula kokufunyanwa, kunye nexabiso elonyukayo ngomthengi ngamnye.
CPL - Iindleko ngeNkokeli nganyeI-CPL ithathela ingqalelo zonke iindleko eziza kwenza ukuba zikhokele. Kubandakanya intengiso yeedola ezichithwe, ukudala izibambiso, iifizi zokubamba iwebhu, kunye nezinye iindleko, umzekelo.
I-CPM - Iindleko ngamawaka ngamawaka: I-CPM yenye indlela abapapashi abasebenzisa ngayo ukuhlawulisa intengiso. Le ndlela ihlawulisa ngokubonakala kwe-1000 (M linani lamaRoma eli-1000). Abathengisi bahlawuliswa ngalo lonke ixesha kubonakala intengiso yabo, hayi ukuba icofwe kangaphi.
CPQ - Qwalasela ixabiso lamaxabiso: Qwalasela, isoftware yokucaphula amaxabiso ligama elisetyenzisiweyo kwishishini ukuya kwishishini (B2B) ukuchaza iinkqubo zesoftware ezinceda abathengisi ukuba bacaphule iimveliso ezintsonkothileyo nezilungisekayo.
ICRM - Ulawulo oludibene nabathengiI-CRM luhlobo lwesoftware evumela iinkampani ukuba zilawule kwaye zihlalutye unxibelelwano lwabathengi kulo lonke ubudlelwane babo kunye nobomi beebhayisekile ukuze bomeleze obu budlelwane. Isoftware yeCRM inokukunceda uguqule izikhokelo, ukondle ukuthengisa kwaye uncede ekugcineni abathengi.
CR - Intlawulo yokuguqulwaInani labantu abenza izinto, lahlulwe ngenani elinokuba nalo. Umzekelo, ukuba iphulo lakho le-imeyile lifikelela kumathemba ali-100 kunye neempendulo ezingama-25, inqanaba lokuguqula kwakho ngama-25%
I-CRO - Ngubanif IGosa leNgenisoIsigqeba esongamela ukuthengisa kunye nentengiso ngaphakathi kwinkampani.
I-CRO - UkuSebenza kweNqanaba lokuGuqulwaEsi sigama sisishunqulelo sokujonga ujonge kwisicwangciso-qhinga sentengiso kubandakanya iwebhusayithi, iphepha lokufika, imidiya yoluntu, kunye nee-CTA ukuphucula inani lamathemba aguqulwa aba abathengi.
I-CRR - Ireyithi yokuGcina abaThengiIpesenti yabathengi obagcinayo xa kuthelekiswa nenani obukade unalo ekuqaleni kwexesha (ngaphandle kokubala abathengi abatsha).
CSV - Amaxabiso ahlukaniswe ngekoma: Yifomathi yefayile ehlala isetyenziselwa ukuthumela nokungenisa idatha ngaphakathi kweenkqubo. Njengoko igama libonisa, iifayile ze-CSV zisebenzisa iikhoma ukwahlula amaxabiso kwidatha.
I-CTA Shayela kuNyatheloInjongo yokuthengisa umxholo kukwazisa, ukufundisa okanye ukonwabisa abafundi, kodwa ekugqibeleni injongo yawo nawuphi na umxholo kukwenza ukuba abafundi bathathe inyathelo kumxholo abawufundileyo. I-CTA inokuba likhonkco, iqhosha, umfanekiso, okanye ikhonkco lewebhu eliqhuba umfundi ukuba enze ngokukhuphela, ukubiza, ukubhalisa okanye ukuya kumsitho.
I-CTOR - Cofa-ukuvula ireyithi: Ukucofa-kwinqanaba lokuvula linani lokucofa kwinani lee-imeyile ezivuliweyo kunenani le-imeyile ezisiweyo. Le metric ibonelela ngengxelo malunga nendlela uyilo kunye nemiyalezo ehambelana ngayo nabaphulaphuli bakho, kuba olu nqakrazo luvela kuphela kubantu abayijongileyo i-imeyile yakho.
CTR - Cofa ngeNqanaba: I-CTR yi-KPI enxulumene ne-CTA… injani loo nto kuyo isuphu encinci yoonobumba! Iphepha lewebhu okanye i-imeyile yokuqhafaza kwinqanaba leepesenti zabafundi abathatha inyathelo elilandelayo. Umzekelo, kwimeko yephepha lokufika, i-CTR iya kuba linani elipheleleyo labantu abatyelele iphepha lahlulwe ngenani elithatha inyathelo kwaye lihambele kwinyathelo elilandelayo.
I-CTV - Ixhunyiwe kwiTVUmabonakude ononxibelelwano lwe-ethernet okanye onokuqhagamshela kwi-intanethi ngaphandle kwamacingo, kubandakanya iiTV ezisetyenziswa njengemiboniso exhunywe kwezinye izixhobo ezinokufikelela kwi-intanethi.
I-CX - Amava oMthengiUmlinganiso wazo zonke iindawo zonxibelelwano kunye nonxibelelwano umthengi analo kwishishini lakho kunye negama lakho. Oku kunokubandakanya ukusetyenziswa kwemveliso okanye inkonzo yakho, ukubandakanya iwebhusayithi yakho, nokunxibelelana nokunxibelelana neqela lakho lokuthengisa.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (D)
IDAM - Management Asset Digital: Iqonga kunye nenkqubo yokugcina yeefayile zemithombo yeendaba ezityebileyo kubandakanya imifanekiso kunye nevidiyo. La maqonga enza ukuba iinkampani zilawule iiasethi zazo njengoko zisenza, zigcina, zilungelelanisa, zisasaza, kwaye-ngokokukhetha-ziguqula umxholo ovunyiweyo ngophawu in indawo esembindini.
I-DBOR - Ugcino lwedathaUmthombo wedatha yoqhakamshelwano lwakho kwiinkqubo ezinolona lwazi luhlaziyiweyo. Ihlala isaziwa njenge umthombo wenyaniso.
DCO - UkuSebenza koMxholo oMandla: bonisa itekhnoloji yentengiso eyenza iintengiso ezenzelwe wena ezisekwe kwidatha malunga nombukeli ngexesha lokwenyani njengoko intengiso inikezelwa. Ukwenziwa komntu yoyilo kuyatshintsha, kuvavanywe kwaye kulungiswe- kukhokelela ekwandeni kokucofa amaxabiso kunye nokuguqulwa.
DL - Ukufunda okunzulu: ibhekisa kwimisebenzi yokufunda yomatshini esebenzisa uthungelwano lwe-neural olunemigca emininzi. Kwangelo xesha, ukonyusa inani lemiqolo kufuna amandla okuqhubekeka kweekhompyuter kwaye ihlala ilixesha elide loqeqesho kwimodeli.
I-DMP - Inkqubo yolawulo lweenkcukacha: Iqonga elidibanisa idatha yomntu wokuqala kubaphulaphuli (accounting, inkonzo yabathengi, CRM, njl.
DPI - Amachaphaza nge-intshi nganye: Isisombululo, njengoko silinganisiwe zingaphi iipikseli eziyilelwe nge-intshi kwiscreen okanye eziprintwe kwinto.
I-DRR - Ireyithi yokugcinwa kweDola: Ipesenti yengeniso oyigcinayo xa kuthelekiswa nengeniso obunayo ekuqaleni kwexesha (kungabalwa ingeniso entsha). Iindlela zokubala oku kukwahlula abathengi bakho kuluhlu lwengeniso, emva koko ubale iCRR kuluhlu ngalunye.
I-DSP - Ibango leQonga elisecaleni: Iqonga lokuthenga lentengiso elingena kwimveliso zentengiso ezininzi kwaye likwenza ukuba ujolise kwaye ubhide kwimiboniso ngexesha langempela.
DXP - Iqonga lamava edijithali: isoftware yeshishini yenguqu yedijithali egxile ekuphuculeni amava abathengi. Ezi ziqonga zinokuba yimveliso enye kodwa zihlala zilulungelelwaniso lweemveliso ezibandakanya imisebenzi yedijithali kunye namava abathengi axhunyiwe. Ngobumbano, babonelela ngohlalutyo kunye nokuqonda kugxile kumava wabathengi.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (E)
ELP - Iqonga lokuMamela amaShishini: Iqonga elijonga ukukhankanywa kwedijithali kwishishini lakho, uphawu, okhuphisana nabo, okanye amagama aphambili kwaye kukunceda ulinganise, uhlalutye, kwaye uphendule kule nto ithethwayo.
I-ERP - Icebo lonikezo lwezeshishini: ulawulo oludibeneyo lweenkqubo eziphambili zeshishini kwimibutho emikhulu yamashishini.
I-ESP - Umboneleli ngeNkonzo ye-imeyile: Iqonga elikuvumela ukuba uthumele inani elikhulu lonxibelelwano lokuthengisa okanye ii-imeyile zentengiselwano, ulawula ababhalisile, kwaye uhambelana nemigaqo ye-imeyile.
EOD - Ukuphela kosuku: Njengakwi… “Kufuneka sihlangabezane nesabelo sethu sikaMeyi nge-EOD.” Ihlala isetyenziswa ngokungafaniyo neCBB (ukuvalwa kweShishini). Ngokwembali, i-COB / EOD ithetha nge-5 emva kwemini
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (F)
FAB - Iimpawu, Izibonelelo zeZiboneleloEnye yeendlela zokuthengisa ezinomnqweno, le ikhumbuza amalungu eqela lokuthengisa ukuba agxile kwizibonelelo umthengi anokuzifumana kwimveliso okanye kwinkonzo yabo, kunokuba bathengise.
FKP-FIimpawu ze-acial: Amanqaku aqhele ukwenziwa ecaleni kwempumlo, amehlo, nomlomo, ukwenza utyikityo lobuso olwahlukileyo kumntu ngamnye.
FUD - Uloyiko, ukungaqiniseki, ukuthandabuza: Indlela yokuthengisa esetyenziselwa ukufumana abathengi ukuba bahambe, okanye bangakhethi ukusebenza nomntu okhuphisana naye ngokunika ulwazi olubangela ukuthandabuza.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (G)
GA - google Analytics: Esi sisixhobo sikaGoogle esinceda abathengisi ukuba baqonde ngcono abaphulaphuli babo, ukufikelela, umsebenzi kunye neemetriki.
IGAIDI - Isazisi seNtengiso sikaGoogle: Isazisi esikhethekileyo, esingahleliwe esibonelelwe ngabathengisi ukuba balandele isixhobo se-Android. Abasebenzisi banokuseta kwakhona ii-GAIDs zezixhobo zabo okanye babakhubaze ukuba bazikhuphele ngaphandle izixhobo zabo ekulandeleleni.
IGAN - Inzala yeNzala evelisayo: uthungelwano lwe-neural olunokusetyenziselwa ukuvelisa umxholo omtsha nohlukileyo.
I-GDD - Uyilo oluqhutywa kukuKhulaOlu kuyilo ngokutsha okanye ukukhula kwewebhusayithi kukonyusa ngabom kusenziwa uhlengahlengiso oluqhutywa yidatha.
I-GDPR - Umgaqo-jikelele woKhuselo loLwazi: umgaqo malunga nokhuselo lwedatha kunye nemfihlo kwi-European Union nakwindawo yezoqoqosho yaseYurophu. Ikwajongana nokuhanjiswa kwedatha yobuqu engaphandle kwe-EU kunye ne-EEA.
GXM - Ulawulo lwamava ezipho: Isicwangciso sokuthumela izipho kunye namakhadi ezipho ngokwamanani kwithemba kunye nabathengi ukuqhuba ulwazi, ukufumana, ukuthembeka, kunye nokugcinwa.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (H)
H2H - Ebantwini-eBantwiniI-1: 1 intengiso yobuqu kunye neenzame zentengiso, ezithi zilinganiswe ngokuzenzekelayo, apho ummeli wenkampani ethumela isipho okanye umyalezo wobuqu kwithemba lokukhuthaza ukubandakanyeka.
I-HTML - UlwimiI-HTML yimigaqo esetyenziswayo yenkqubo yokwenza amaphepha ewebhu. Ichaza umxholo, ubume, isicatshulwa, imifanekiso kunye nezinto ezisetyenzisiweyo kwiphepha lewebhu. Namhlanje, uninzi lwesoftware yokwakha iwebhu iqhuba i-HTML ngasemva.
I-HTTP - IProtokhol yokuGqithisela umbhalo okhawulezileyoInkqubo yesicelo sokuhambisa, ukusebenzisana, iinkqubo zolwazi zehypermedia.
I-HTTPS - IProtokhol yokuGqithisela umbhalo okhawulezileyoulwandiso lweProtokholi yokuGqithisela umxholo. Isetyenziselwa unxibelelwano olukhuselekileyo kwinethiwekhi yekhompyuter kwaye isetyenziswa kakhulu kwi-Intanethi. Kwi-HTTPS, umgaqo-nkqubo wonxibelelwano ubhalwe ngokufihliweyo kusetyenziswa uKhuseleko loLuhlu lwezoThutho okanye, ngaphambili, uLuhlu lweZiseko eziKhuselekileyo.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (I)
IAA - Intengiso ye-In-App: Izibhengezo zabathengisi bomntu wesithathu ezipapashwa kwisicelo esiselfowuni kusetyenziswa iinethiwekhi zentengiso.
IAP - UkuThenga ngaphakathi kwe-App: Into ethengwe ngaphakathi kwesicelo, ngesiqhelo usetyenziso lweselfowuni olusebenza kwi-smartphone okanye esinye isixhobo esikwiselfowuni okanye ithebhulethi.
MNA CA - Umdibaniso woMxholo oHlanganisiweyo: Uhlalutyo olunxulumene nomxholo olunikezela ukuqonda okusebenzayo usebenzisa ubuchwephesha bobuchwephesha bobuchwephesha (AI).
ICP - IProfayili yoMthengi efanelekileyoUmthengi persona owenziweyo kusetyenziswa idatha yokwenyani kunye nolwazi olungenisiweyo. Yinkcazo yethemba elifanelekileyo lokuba iqela lakho lokuthengisa lililandele. Kubandakanya ulwazi lwedemokhrasi, ulwazi lwejografi, kunye neempawu zengqondo.
I-IDFA - Isazisi saBathengisi: sisixhobo esichazayo esingahleliwe esabelwe iApple kwisixhobo somsebenzisi. Abathengisi basebenzisa oku ukulandelela idatha ukuze bakwazi ukuhambisa intengiso eyenziwe ngokwezifiso. Nge-iOS 14, oku kuyakwenziwa ngenxa yesicelo sokungena endaweni yokungagqibeki.
ILV - Ukuhamba phambili kweVelocityUmlinganiselo wenqanaba okhokelela kulo uyanda.
iPaaS - Iplatifti yokudityaniswa njengeNkonzo: Izixhobo zokuzenzekelayo ezisetyenziselwa ukudibanisa usetyenziso lwesoftware ezisasazwe kwiindawo ezahlukeneyo, kubandakanya usetyenziso lwamafu kunye nokusetyenziswa kwesicelo.
IPTV - Protocol yeTV iThelevishini: ukuhanjiswa komxholo wethelevishini kuthungelwano lweProtocol ye-Intanethi endaweni yeefomathi zesiko zethelevishini kunye nekhebula.
ISP - Umboneleli weNkonzo yeeInternet: Umboneleli wofikelelo kwi-intanethi onokuthi abonelele ngeenkonzo ze-imeyile kumthengi okanye kwishishini.
IVR - Ukuphendula ngelizwi: Ukuphendula ngelizwi okunxibelelana yitekhnoloji evumela abantu ukuba banxibelelane nenkqubo yefowuni ehambelana nekhompyuter. Iitekhnoloji ezindala zisebenzisa iithowuni zebhodi yefowuni… iinkqubo ezintsha zisebenzisa impendulo yelizwi kunye nokulungiswa kwendalo kulwimi.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (J)
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (K)
I-KPI-Isalathi seNtsebenzo esiPhambiliIxabiso elilinganisekayo elibonisa ukuba inkampani iyiphumeza njani injongo yayo. Amanqanaba aphezulu e-KPI agxile ekusebenzeni kweshishini, ngelixa amanqanaba asezantsi e-KPI egxila kwiinkqubo kumasebe afana nentengiso, ukuthengisa, i-HR, inkxaso kunye nabanye.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (L)
I-L2RM - Khokelela kuLawulo lweNgenisoImodeli yokuzibandakanya nabathengi. Ibandakanya iinkqubo kunye neemetriki kwaye ibandakanya iinjongo zokufunyanwa kwabathengi abatsha, ukuthengisa abathengi abakhoyo kunye nokukhula kwengeniso.
I-LAARC - Mamela, Vuma, Vavanya, Phendula, Qinisekisa: Indlela yokuthengisa esetyenzisiweyo xa ujongene nengxelo engalunganga okanye inkcaso ngexesha lokuthengisa.
UMTHETHO - Mamela, Vuma, Chonga, Buyela umva: Enye yeendlela zokuthengisa ezithengisayo. Le isetyenziselwa ukuphikisa inkcaso kwintengiso yentengiso. Kuqala, mamela izinto ezibaxhalabisayo, emva koko uphinde ubabuyele ukwamkela ukuqonda kwakho. Chonga esona sizathu siphambili sokungathengi kunye nokuguqula inkxalabo yabo ngokumisela kwakhona inkcaso yabo ngendlela efanelekileyo.
EMVA Ukulandela umkhondo weNtengisoInqaku lesicelo esiphathwayo esivumela abasebenzisi ukuba baphume ekubeni ne-ID yaBathengisi (IDFA). Ngolu seto lwenziwe lwasebenza, i-IDFA yomsebenzisi ibonakala ingenanto, ke umsebenzisi akazukubona iintengiso ezithile ezijolise kubo kuba, ngokubona kwenethiwekhi, isixhobo asinabunikazi.
I-LSTM - Imemori yeXesha elifutshane: Umahluko wenethiwekhi ephindaphindayo ye-neural. Ukomelela kwee-LSTM kukukwazi kwabo ukukhumbula ulwazi ixesha elide kwaye balisebenzise kulo msebenzi ungoku.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (M)
IIMPAWU IiNtengiso zeSelfowuni or Izazisi zeNtengiso eziSelfowuni: umsebenzisi okhethekileyo, onokusetha kwakhona, ongaziwayo onxulunyaniswa nesixhobo somsebenzisi we-smartphone kwaye uxhaswe yinkqubo yabo yokusebenza yeselfowuni. Ii-MAID zinceda abaphuhlisi kunye nabathengisi ukuba babone ukuba ngubani osebenzisa usetyenziso lwabo.
Imephu - Iqonga lokuThengisa ngokuZenzekelayo: Itekhnoloji enceda abathengisi ukuguqula amathemba kubathengi ngokususa ukuchukumisa okuphezulu, iinkqubo eziphindaphindayo ngesandla ezinezisombululo ezizenzekelayo. Ilifu lokuThengisa ngeNtengiso kunye neMarketo yimizekelo yee-MAP.
MDM - Ulawulo lweDatha eyiNtloko: Inkqubo eyenza iseti efanayo yedatha kubathengi, iimveliso, abanikezeli, kunye namanye amaziko eshishini avela kwiinkqubo ezahlukeneyo zetekhnoloji.
I-ML-Machine Ukufunda: I-AI kunye neML zihlala zisetyenziswa ngokungafaniyo, kukho umahluko phakathi kwala mabinzana mabini.
I-MMS-Inkonzo yeMiyalezo yeMultimedia: ivumela abasebenzisi beSMS ukuba bathumele umxholo wemultimedia, kubandakanya imifanekiso, iaudiyo, abafowunelwa kwifowuni kunye nevidiyo.
MNIST - Iziko leSizwe leMigangatho kunye neTekhnoloji: Isiseko sedatha ye-MNIST yenye yezona ndawo zidume kakhulu zedatha ekumatshini wokufunda.
Inyama - Inyanga-Ngaphezu kwenyangaIinguqu ezichaziweyo ngokunxulumene nenyanga edlulileyo. I-MoM ixhaphake ngakumbi kunemilinganiselo yekota okanye yonyaka nonyaka kwaye iyabonakalisa Iziganeko ezinjengeeholide, iintlekele zendalo, kunye nemicimbi yezoqoqosho.
MQA - Iakhawunti efanelekileyo yokuthengisa: i ABM kulingana nokuthengisa okufanelekileyo. Njengoko i-MQL iphawulwe njengokulungele ukugqithisela kwintengiso, i-MQA yiakhawunti eboniswe kwinqanaba eliphezulu lokuzibandakanya ukubonisa ukulungela ukuthengisa.
MQL - Zikhokelela kwiNtengisoNawuphi na umntu oye wazibandakanya neenzame zakho zokuthengisa kwaye wabonisa ukuba banomdla omkhulu kwiminikelo yakho kwaye unokuba ngumthengi yi-MQL. Ngokubanzi kufunyanwa phezulu okanye embindini wefaneli, ii-MQLs zinokukhuliswa ngokuthi kuthengiswe kwaye kuthengiswe kuguqulwe kube kubathengi.
MQM - Iintlanganiso ezifanelekileyoI-MQM sisalathiso esingundoqo sokusebenza esichazwa njenge-CTA ebonakalayo (ukubiza isenzo) kuzo zonke iinkqubo zakho zokuthengisa zedijithali kunye neziganeko ezibonakalayo.
MR - Eyona Mixed: Ukudityaniswa kwehlabathi lokwenyani kunye nelokwenyani ukuvelisa iimeko ezintsha kunye nokubonwa, apho izinto ezibonakalayo kunye nezidijithali zihlala khona kwaye zinxibelelana ngexesha langempela.
MRM - Ulawulo lweZibonelelo: Amaqonga asetyenzisiweyo ukuphucula amandla enkampani ukulungiselela, ukulinganisa, kunye nokwandisa izixhobo zayo zokuthengisa. Oku kubandakanya abantu kunye nezixhobo ezinxulumene neqonga.
MRR - Ingeniso yaqho ngenyanga: Iinkonzo ezisekwe kubhaliso zilinganisa ingeniso eqikelelweyo elindelekileyo rhoqo ngenyanga.
MFA - Ubungqina bokuba yi-Multi-FactorUmaleko ongezelelweyo wokhuseleko osetyenziselwa ukuqinisekisa ukhuseleko kwiiakhawunti ezikwi-Intanethi ezingaphaya kwegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Umsebenzisi ufake igama eligqithisiweyo emva koko ayacelwa ukuba afake amanqanaba ongezelelweyo okuqinisekisa, ngamanye amaxesha aphendule ngekhowudi ethunyelwe ngomyalezo obhaliweyo, nge-imeyile, okanye ngesicelo esingqinisisa.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (N)
NER - Ukwamkelwa kweQumrhu elinamagama: inkqubo ebalulekileyo kwiimodeli ze-NLP. Izinto ezinamagama zibhekisa kumagama afanelekileyo ngaphakathi kwesicatshulwa- kuhlala abantu, iindawo, okanye imibutho.
I-NFC - Kufuphi neNxibelelwano lweeNdawo: iinkqubo zonxibelelwano zonxibelelwano phakathi kwezixhobo zombane zombane kumgama we-4 cm okanye ngaphantsi. I-NFC ibonelela ngoqhagamshelo olukhawulezayo lwesantya kunye nokuseta okulula okunokusetyenziselwa ukuqala i-bootstrap ngakumbi ukudibanisa ngaphandle kwamacingo
I-NLP- NUkwenziwa koLwimi: ukufundwa kolwimi lwendalo lomntu ngaphakathi kokufunda komatshini, ukudala iinkqubo eziluqonda ngokupheleleyo olo lwimi.
NLU - Ukuqonda uLwimi lweNdaloUkuqondwa kolwimi lwendalo yindlela ubukrelekrele bokusebenza obukwazi ngayo ukutolika nokuqonda injongo yolwimi olwenziweyo kusetyenziswa i-NLP.
I-NPS - Amaphuzu okuPhucula iNtengisoImethrikhi yokwanelisa abathengi ngombutho. Amaphuzu okuPhucula iNtengiso ilinganisa amathuba okuba umthengi wakho angacebisa imveliso okanye inkonzo yakho kwabanye. Ukulinganiswa kwisikali se-0 ukuya kwi-10 nge-zero ubuncinci kunokwenzeka ukuba bucebise.
I-NRR - Ingeniso eqhubekayo yeNet: Ingeniso iyonke yeeakhawunti ezisanda kufunyanwa kwinkqubo yakho yokuthengisa kunye nengeniso yenyanga eyongeziweyo kwiiakhawunti zangoku, thabatha ingeniso elahlekileyo kwiiakhawunti ezivaliweyo okanye ezincitshisiweyo ngexesha elifanayo, elilinganiswa rhoqo ngenyanga.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa iiAcronyms kunye nezifinyezo (O)
I-OCR-OUkwamkelwa komlinganiswa ongumlinganiswa: inkqubo yokuchonga amagama abhaliweyo okanye aprintiweyo.
OOH - Ngaphandle kweKhayaIntengiso ye-OOH okanye intengiso yangaphandle, ekwabizwa ngokuba yimithombo yeendaba engaphandle kwamakhaya okanye imithombo yeendaba zangaphandle, intengiso efikelela kubathengi ngelixa bengaphandle kwamakhaya abo.
OTT - Ngaphaya kwaphezulu: Inkonzo yemidiya yokusasaza enikezelwa ngokuthe ngqo kubabukeli abakwi-intanethi. I-OTT idlula intambo, usasazo kunye neqonga likamabonwakude lesathelayithi.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa iiAcronyms kunye nezifinyezo (P)
PDF - Ifayile yoXwebhu ephathekayoI-PDF yifomathi yefayile enqamlezileyo eyenziwe yiAdobe. I-PDF yifomathi yefayile yemveli yeefayile ezifikelelweyo nezilungisiweyo kusetyenziswa iAdobe Acrobat. Amaxwebhu aso nasiphi na isicelo anokuguqulwa abe yiPDF.
I-PPC - Hlawula nge Cofa: Umshicileli ohlawulisa abathengisi ngesenzo ngasinye bathathe (cofa) kwintengiso yabo. Jonga kwakhona i-CPC.
I-PFE-PUkuLungiswa kobuso: indlela yokwenza imisebenzi yokwamkelwa kobuso kuseto olungacaciswanga.
PII - Ulwazi oluchongiweyo lomntu: Ixesha elisekwe e-US lokuqokelela okanye ukuthengwa kwedatha ethi, iyodwa okanye xa idityaniswe nenye idatha, inokusetyenziselwa ukubonisa umntu.
IPIM - Ulawulo loLwazi lweMvelisoUkulawula ulwazi olufunekayo lokuthengisa kunye nokuthengisa iimveliso ngeendlela zokuhambisa. Iseti esembindini yedatha yemveliso ingasetyenziselwa ukwaba / ukufumana ulwazi kunye nemithombo yeendaba ezinje ngewebhusayithi, iikhathalogu zokuprinta, iinkqubo ze-ERP, iinkqubo ze-PLM, kunye nokutya kwedatha ngombane kumaqabane orhwebo.
I-PLM - Ulawulo lobomi beMvelisoInkqubo yokulawula wonke umjikelo wobomi bemveliso kwasekuqalekeni, kuyilo lobunjineli kunye nasekwenzeni, kwinkonzo kunye nokulahlwa kwemveliso eyenziweyo.
PM - Umlawuli weprojektInkqubo yokuqalisa, ukucwangcisa, ukusebenzisana, ukwenza, ukulandelela kunye nokuvala umsebenzi weqela ukufezekisa iinjongo kunye nexesha.
PMO - Ofisi yoLawulo lweProjekthi: isebe ngaphakathi kumbutho ochaza ugcina imigangatho yolawulo lweprojekthi.
PMP - Ulawulo lweProjekthi yoBuchuleIsikhundla esaziwa njengehlabathi esibonelelwa liSebe IZiko loLawulo lweProjekthi (PMI).
PQL - Imveliso ekhokelayo: lithemba eliye lafumana amaxabiso anentsingiselo kunye nokwamkelwa kwemveliso kusetyenziswa imveliso ye-SaaS kusetyenziswa isilingo sasimahla okanye imodeli ye-freemium.
Inqanaba lephephaInqanaba lephepha limiselwe yi-algorithm esetyenziswe nguGoogle enika iwebhusayithi nganye ubunzima bamanani ngokusekwe kwinani leendlela ezahlukeneyo eziyimfihlo. Isikali esisetyenzisiweyo sili-0 ukuya kwi-10 kwaye eli nani limiselwa linani lezinto kubandakanya amakhonkco angenayo, kunye nenqanaba lephepha leendawo ezinxibeleleneyo. Ukuphakama kwenqanaba lephepha lakho, ukuba libaluleke ngakumbi kwaye indawo yakho ibonwa nguGoogle.
Eyobudlelwane boluntuInjongo ye-PR kukufumana ingqalelo yasimahla kwishishini lakho. Inika ngobuchule ishishini lakho ngendlela enomdla kwaye inomdla kwaye ingeyiyo indlela ethe ngqo yokuthengisa.
PRM - Ulawulo loBudlelwane bamaqabaneInkqubo yeendlela, ubuchule, kunye namaqonga anceda umthengisi ukulawula ubudlelwane bamaqabane.
PSI - Ikhasi eliPhezulu: I I-Google PageSpeed ​​Insights Amanqaku ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100 yamanqaku. Amanqaku aphezulu angcono kwaye amanqaku angama-85 okanye ngaphezulu abonisa ukuba iphepha liqhuba kakuhle.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa iiAcronyms kunye nezifinyezo (Q)
QOE - Umgangatho wamava: Umgangatho wamava ngumlinganiso wolonwabo okanye wokucaphukisa amava abathengi kunye nenkonzo. Ngokukodwa kwividiyo, QoE igqitywa ngumgangatho we yokuzonwabisa uhanjiswe kwisixhobo somsebenzisi, kwaye umgangatho wokudlala kwakhona xa ubonakalisa yokuzonwabisa kwisixhobo somsebenzisi.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (R)
IREGEX - Inkcazo rhoqo: indlela yophuhliso yokukhangela kunye nokuchonga ipateni yabalinganiswa kwisicatshulwa ukuba sitshatise okanye sibuyisele isicatshulwa. Zonke iilwimi zangoku zenkqubo zixhasa iiNkcazo eziQhelekileyo
REST - Ukumelwa koRhulumente oMeleyoUhlobo loyilo lwe-API yeenkqubo ezisasaziweyo zokuthetha omnye komnye ngeHTTP.
I-RFID - Ukuchongwa kweRadio-frequency: isebenzisa imihlaba ye-electromagnetic ukuchonga ngokuzenzekelayo kunye nokulandelela iithegi ezinamathele kwizinto. Inkqubo yeRFID iqukethe isithuthi esincinci somsakazo, isamkeli sikanomathotholo, kunye nesidlulisi
RFP - Isicelo sesindululoXa inkampani ifuna ukumelwa kwintengiso iya kukhupha i-RFP. Iinkampani zentengiso emva koko zilungiselela isindululo esisekwe kwisikhokelo esisekwe kwi-RFP kwaye siyisondeze kubathengi abanokubakho.
RGB - Bomvu, Luhlaza, Luhlaza: Imodeli eyongeziweyo yombala apho umbala obomvu, oluhlaza, kunye noblowu wongezwa kunye ngeendlela ezahlukeneyo zokuvelisa uluhlu olubanzi lwemibala. Igama lemodeli livela koonobumba bokuqala bezinto ezintathu eziphambili ezongeziweyo, obomvu, oluhlaza, kunye nohlaza okwesibhakabhaka.
RMN - Inethiwekhi yeendaba yokuThengisa: iqonga lentengiso elidityaniswe kwiwebhusayithi yomthengisi, usetyenziso, okanye amanye amaqonga edigital, avumela iimveliso ukuba zibhengeze kwiindwendwe zomthengisi.
I-RNN-RInethiwekhi yeNeural ecurrent: uhlobo lwenethiwekhi ye-neural ene-loops. Ubume bayo benzelwe ukuvumela ulwazi olwenziweyo ngaphambili ukuba luchaphazele indlela le nkqubo elitolika ngayo ulwazi olutsha.
INDLELA - Buyela kuThengiso lweNtengiso: I-metric yokuthengisa elinganisa ukusebenza kwephulo lokwazisa ngokulinganisa ingeniso eveliswe kwidola nganye esetyenzisiweyo.
I-ROI - Buyela kwi InvestmentEnye yeendlela zokuthengisa ezithetha ngokujongana nezobalo, le yimetri yokusebenza elinganisa inzuzo kwaye ibalwa kusetyenziswa ifomula ye-ROI = (ingeniso- indleko) / iindleko. I-ROI inokukunceda ekuboneni ukuba ngaba utyalomali olunokubakho lufanelekile ngaphambili kunye neendleko eziqhubekayo okanye ukuba utyalomali okanye inzame kufuneka iqhubeke okanye ipheliswe.
I-ROMI - Buyisela kuTyalo-mali lokuThengisa: Le yimilinganiselo yokusebenza ebonisa amanyathelo enzuzo kwaye ibalwa kusetyenziswa ifomula yeROMI = (ingeniso- indleko yentengiso) / iindleko. I-ROMI inokukunceda ubone ukuba inyathelo lokuthengisa elinokubakho lifanelekile na ngaphambili kunye neendleko eziqhubekayo okanye ukuba kufuneka iinzame ziqhubeke okanye zipheliswe.
RPA - Inkqubo yokuZenzekelayo: Inkqubo yeshishini lokuzenzekelayo isekwe kwiirobhothi zesoftware okanye ubukrelekrele bokuzenzela / abasebenzi bedijithali.
RSS - Ulungelelwaniso olulula Ngokwenene: I-RSS yinkcazo yemakhaphu yeXML yokudibanisa kunye nokwabelana ngomxholo. inika abathengisi kunye nabapapashi indlela yokuhambisa ngokuzenzekelayo kunye nokudibanisa umxholo wabo. Ababhalisi bafumana uhlaziyo oluzenzekelayo xa kupapashwa umxholo omtsha.
I-RTB - Ukubhida ngeXesha langempela: indlela ekuthengwa ngayo i-inventri yentengiso kunye nokuthengiswa ngokomboniso ngamnye, ngefandesi yenkqubo kwangoko.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa iiAcronyms kunye nezifinyezo (S)
I-SaaS - Isoftware njengeNkonzo: I-SaaS yisoftware ebanjwe kwilifu yinkampani yomntu wesithathu. Iifemu zentengiso zihlala zisebenzisa i-SaaS ukuvumela ukusebenzisana ngokulula. Igcina ulwazi kwilifu kunye nemizekelo ibandakanya iGoogle Apps, Salesforce, kunye neDropbox.
SAL - Ukuthengisa kwamkelekile: Le yi-MQL edluliselwe ngokusemthethweni kwintengiso. Iphononongelwe umgangatho kwaye kufanelekile ukuyilandela. Ukuchaza iikhrayitheriya zezinto ezifanelekileyo kunye ne-MQL ukuba ibe yi-SAL kunokunceda abathengisi ukuba bathathe isigqibo sokuba ngaba kufuneka batyale ixesha kunye nomzamo ekulandeleleni.
SDK - Isoftware yonjiniyela: Ukunceda abaphuhlisi bafumane ukuqala kwentloko, iinkampani zihlala zipapasha iphakheji ukubandakanya iklasi okanye imisebenzi eyimfuneko ngokulula kwiiprojekthi ezibhalwa ngumqambi.
I-SDR - Ummeli woPhuhliso lweNtengisoIndima yentengiso enoxanduva lokuphuhlisa ubudlelwane namashishini amatsha kunye namathuba.
SEM - Yoshishino LwezoKhenketho: Ngokwesiqhelo ibhekisa kwintengiso yeinjini yokukhangela ethe ngqo ukuhlawula unqakrazo ngalunye (PPC).
I-SEO - UkuSebenza kweeNjini zoPhando: Injongo ye-SEO kukunceda iwebhusayithi okanye isiqwenga somxholo "sifumaneke" kwi-intanethi. Iinjini zokukhangela ezinje ngeGoogle, Bing, kunye neYahoo iskena umxholo okwi-intanethi ngokubaluleka. Sebenzisa amagama aphambili afanelekileyo Amagama aphambili anomsila omde anokubanceda ukuba babonise isiza ngokufanelekileyo ukuze xa umsebenzisi esenza uphando, ifumaneke ngokulula. Zininzi izinto ezichaphazela i-SEO kunye neenguqulelo zealgorithmic ezigcinwe ngokusondeleyo kulwazi lokuthengisa.
I-SERP - Iphepha leNjini yokuKhangela: Iphepha owela kulo xa ukhangela igama elithile elingundoqo okanye igama kwiinjini yokukhangela. Uluhlu lwe-SERP luwadwelisa onke amaphepha asemgangathweni kwelo gama elingundoqo okanye kwikota.
SFA - Ukuzisebenzisela ukuthengisaIsifinyezo sentengiso sesoftware esizenzekelayo kwimisebenzi yokuthengisa efana nolawulo lwempahla, ukuthengisa, ukulandelela unxibelelwano lwabathengi, kunye nokuhlalutya uqikelelo kunye noqikelelo.
SKU - Icandelo lokugcina isitokhwe: Isazisi esikhethekileyo sento ethengwayo. I-SKU ihlala ikhowudiweyo kwi-barcode kwaye ivumela abathengisi ukuba baskene kwaye balandelele ngokuzenzekelayo intshukumo yempahla. I-SKU idityaniswa ngokudityaniswa kwealphanumeric yabalinganiswa abasibhozo nangaphezulu.
SLA - Isivumelwano soMgangatho weNkonzo -I-SLA luxwebhu lwangaphakathi olusemthethweni oluchaza indima yentengiso kunye nentengiso kwisizukulwana esikhokelayo kunye nenkqubo yokuthengisa. Icacisa ubungakanani kunye nomgangatho wentengiso ekhokelayo ekufuneka ivelisile kunye nendlela iqela lokuthengisa eliza kulilandela ngayo ukhokelo ngalunye.
SM - Imidiya yokuncokolaImizekelo ibandakanya i-Facebook, i-LinkedIn, i-Twitter, i-Instagram, iPinterest, i-Snapchat, iTikTok, kunye ne-Youtube. Iindawo ze-SM ngamaqonga avumela abasebenzisi ukuba bathumele umxholo kubandakanya ividiyo kunye nevidiyo. Amaqonga anokusetyenziselwa ishishini okanye umxholo wakho kwaye avumele ukugcwala kwezinto eziphilayo kunye nezithuba ezixhaswayo okanye ezihlawulelweyo.
SMART - Ecacileyo, enokulinganisa, enokufikeleleka, yokwenyani, yokubopha ixeshaIsigama esisetyenziselwa ukuchaza inkqubo yokumisela iinjongo. Kuyanceda ukuba uchaze ngokucacileyo kwaye usete iinjongo ngokuchaza amanyathelo amanyathelo afunekayo ukufezekisa.
SMB - Amashishini amancinci naphakathiIsifinyezo esichaza amashishini aphakathi kwe-5 kunye ne-200M kwingeniso. Ikwabhekisa kubathengi abanabasebenzi abali-100 okanye abambalwa (abancinci) ukuya kuthi ga kubasebenzi abali-100 ukuya kuma-999 (abaphakathi)
ISME - Ingcali yemicimbi yesihloko: Igunya kwindawo ethile okanye isihloko esisisibonelelo sokuphucula unxibelelwano lwabathengi bakho. Kubathengisi, abathengi abanokubakho, abathengi abaphambili, abameli bezentengiso, kunye nabameli beenkonzo zabathengi bahlala be-SME ababonelela ngegalelo elibalulekileyo.
Social Media MarketingSebenzisa amaqonga eendaba ezentlalo njengendlela yokwazisa umxholo wakho, ukubhengeza amathemba, ukubandakanya abathengi, nokumamela amathuba okanye iinkxalabo malunga nedumela lakho.
SMM - Ulawulo lwezeNtlaloInkqubo kunye neenkqubo ezisebenzisa imibutho ukuhambisa izicwangciso zentengiso zentlalo.
I-SMS-Inkonzo yoMyalezo omfutshane: Ngomnye wemigangatho emidala yokuthumela umyalezo osekwe kwisicatshulwa ngezixhobo eziphathwayo.
Isepha - IProtokholi yokuFikelela kwinto elulaI-SOAP yinkqubo yemiyalezo yokutshintshisa ulwazi olumiselweyo ekuphunyezweni kweenkonzo zewebhu kuthungelwano lweekhompyuter
JIKELELE - Imeko, Ingxaki, Ukuthintela, Isidingo: Inkqubo yokuthengisa eyindlela "yokwenzakalisa nokuhlangula". Ufumanisa amanqaku eentlungu kwaye ubenze "buhlungu" ngokwandisa iziphumo ezinokubakho. Emva koko uza "kuhlangula" kunye nemveliso okanye inkonzo yakho
INtloko yeNtengiso: I-SQL sisikhokelo esikhangele phambili ukuba sikulungele ukuba ngumthengi kwaye ihambelane neekhrayitheriya ezimiselwe kwangaphambili zomgangatho ophezulu. Ii-SQLs zihlala ziphicothwa ngokuthengisa kunye nokuthengisa ngaphambi kokuchongwa njengokhokelo olufanelekileyo lokuthengisa.
ULwimi oluCwangcisiweyo loLwimiulwimi olusetyenziswa kwinkqubo kwaye luyilelwe ukulawula idatha egcinwe kwinkqubo yolawulo lwedatha enxulumene, okanye ukuqhubekeka komjelo kwinkqubo yolawulo lwedatha yokuhambelana kwedatha.
I-SRP - Iqonga lobuDlelwane boLuntu: Iqonga elenza ukuba iinkampani zibeke iliso, ziphendule, zicwangcise, zenze, kwaye zamkele umxholo kuwo onke amajelo eendaba ezentlalo.
I-SSL - Izikhokelo eziKhuselekileyo: Iprotokholi yeeprotokholi eyilelwe ukubonelela ngokhuseleko konxibelelwano kwinethiwekhi yekhompyuter.
I-SSP - Iplatifomu yokubonelela ngecala: Iqonga elenza ukuba abapapashi babonelele ngeempahla kwiimarike zentengiso ukuze bathengise indawo yentengiso kwindawo yabo. Ii-SSP zihlala zidityaniswa nee-DSPs ukwandisa ukufikelela kwazo kunye nethuba lokuqhuba ingeniso yentengiso.
STP - Ukwahlulahlulwa, ukuJoliswa, ukubekwa kwindawo: Imodeli ye-STP yentengiso ijolise ekusebenzeni kakuhle kwezorhwebo, ukukhetha awona macandelo abaluleke kakhulu kwishishini, emva koko kuphuhliswe umxube wentengiso kunye nesicwangciso sokubeka imveliso kwicandelo ngalinye.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo kunye nezifinyezo (T)
TAM - Umphathi weAkhawunti yobuGcisa: Ingcali yemveliso ekhethekileyo esebenza ngokubambisana nemibutho ye-IT ukucwangcisa ngobuchule ukuthunyelwa ngempumelelo kunye nokunceda ekufezekiseni ukusebenza kakuhle nokukhula.
TLD - Idomain ekumgangatho ophezulu: i-domain kwinqanaba eliphezulu kwi-Domain Name System ye-Intanethi emva kweengcambu. Umzekelo www.google.com:
www = ithambeka
google = ithambeka
com = indawo ekumgangatho ophezulu
I-TTFB - Ixesha lokuQala iByte: isikhombisi sokuphendula kwiseva yewebhu okanye izixhobo zenethiwekhi ezilinganisa ubude bomsebenzisi okanye umxhasi owenza isicelo seHTTP kwindawo yokuqala yephepha efunyanwa sisikhangeli somthengi okanye ikhowudi eceliweyo (ye API).
Ukuthengisa kunye nokuThengisa iiAcronyms (U)
UCaaS - Unxibelelwano oluManyeneyo njengeNkonzo: isetyenziselwa ukudibanisa izixhobo zonxibelelwano lwangaphakathi kwishishini lonke ngokusebenzisa izixhobo ezisekwe kwilifu.
UGC-Umxholo owenziwe ngumsebenzisi: ekwabizwa ngokuba ngumxholo owenziwe ngumsebenzisi (i-UGC), naluphi na uhlobo lomxholo, njengemifanekiso, iividiyo, isicatshulwa, uphononongo kunye nomsindo, othunyelwe ngabasebenzisi kwiqonga le-Intanethi.
UGC-Umxholo owenziwe ngumsebenzisi: ekwabizwa ngokuba ngumxholo owenziwe ngumsebenzisi (i-UCC), naluphi na uhlobo lomxholo, njengemifanekiso, iividiyo, isicatshulwa, uphononongo kunye nomsindo, othunyelwe ngabasebenzisi kwiqonga le-Intanethi.
IUI - Indawo yomsebenzisiUyilo lokwenyani olunxibelelanayo nomsebenzisi.
I-URL - Indawo yokuFumana iZibonelelo: Ikwabizwa ngokuba yidilesi yewebhu, sisixhobo sewebhu esichaza indawo ekuyo kwinethiwekhi yekhompyuter kunye nendlela yokuyifumana kwakhona.
I-USP - UkuThengiswa okuThengisiweyo: Ikwabizwa ngokuba yi indawo ekhethekileyo yokuthengisaIsicwangciso-qhinga sentengiso sokwenza izindululo ezizodwa kubathengi ezibaqinisekisileyo ukuba bakhethe uphawu lwakho okanye batshintshele kuhlobo lwakho.
UTM - Imodyuli yokuKhangela kwi-Urchin: ezahlukeneyo ezintlanu zeeparamitha ze-URL ezisetyenziswa ngabarhwebi ukujonga ukusebenza kwemikhankaso ekwi-Intanethi kuyo yonke imithombo yendlela. Baye baziswa ngu-Urchin wangaphambili weGoogle Analytics kwaye baxhaswa yiGoogle Analytics.
UX - Amava omsebenzisi: Lonke unxibelelwano umthengi analo ngophawu lwakho kuyo yonke inkqubo yokuthenga. Amava abaThengi anefuthe kumbono womthengi wegama lakho. Amava aqinisekileyo aguqula abathengi babe ngabathengi kwaye igcine abathengi bangoku benyanisekile.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (V)
VOD - Ividiyo Kwibango: yinkqubo yokuhambisa imithombo yeendaba evumela abasebenzisi ukuba bafumane ukonwatyiswa kwevidiyo ngaphandle kwesixhobo sokonwabisa ividiyo yemveli kwaye ngaphandle kwemida yeshedyuli yosasazo emileyo.
VPAT - Ithemplethi yokuFikelela kweMveliso ngokuzithandela: ishwankathela ukufunyanwa kophicotho lwewebhu kunye nokurekhoda ukuba imveliso okanye inkonzo ihambelana njani neCandelo 508 leMigangatho yokuFikelela, izikhokelo zeWCAG, kunye nemigangatho yamanye amazwe.
VR - người virtual: Ukulinganisa okuveliswe yikhompyuter kwendawo enamacala amathathu enokunxibelelana nokusebenzisa izixhobo ezikhethekileyo ze-elektroniki, ezinje ngesigcina-ntloko esinesikrini ngaphakathi okanye iiglavu ezifakwe iisenzi.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (W)
IWCAG - Izikhokelo zokuFikelela kwiWebhu -Ukubonelela ngemigangatho ekwabelwana ngayo ngokufikelela kumxholo wewebhu ohlangabezana neemfuno zabantu, imibutho kunye noorhulumente kwilizwe jikelele.
WWW - Iwebhu yelizwe jikelele: eyaziwa njengeWebhu, yinkqubo yolwazi apho amaxwebhu kunye nezinye izixhobo zewebhu zichongiwe ngaBafundi beZibonelelo ezifanayo, ezinokuthi zidibaniswe ngumxholo, kwaye zifikeleleke kwi-Intanethi.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa izifinyezo kunye nezifinyezo (X)
I-XML - Ulwimi lweMarkupIXML lulwimi olusetyenziswayo ukufaka idatha kwifomathi enokufundwa ngabantu kunye nokufundeka komatshini.